Mahamaibe Info. About. What's This?
21.750000°S 47.883330°E ﻿ / -21.750000; 47.883330
Mahamaibe dia kaominina malagasy ao aminny distrikani Manakara, Faritanini Fianarantsoa. Ny isam-poniny dia 8853 araka ny faminavinana natao taminny taona 2000. Ny kaodin-kaominina dia 21047 ary ny kaodin-distrika dia 210
Ny entana faharoa lafo vidy indrindra dia banane. Ny zava-bolena lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia cafe. Ny entana fahatelo lafo vidy indrindra dia mangahazo. Ny isanomby dia 801. Ny isanny taona nisiam-pesitry ny vorona teo anelanelanny taona 1999-2001 dia 3. Ny zava-bolena faharoa lehibe indrindra aminny lafinny velarantany dia vary. Ny entana lafo vidy indrindra dia vary. 3 isan-jatonny tanimbary no voatondraka aminny tohidrano na paompy. 99 ny mponina no miasa tany. 1 ny mponina no miasa aminny sampandraharaha. 31 no isanny kisoa.
Ny fitaovam-pitaterana ampiasaina matetika indrindra dia vehicule particulier. Ny faharetanny dia mankany aminny renivohi-paritany dia 9 ora. Ny fotoam-pitaterana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 9 ora. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny andro fahavaratra dia 21500 Fmg. Ny saran-dalanny olona tokana mankany aminny tanàn-dehibem-paritany aminny haintany dia 21500 Fmg.
10 isan-jatonny mponina no tena mahantra dia mahantra. 60 isan-jatonny mponina no atao hoe mahantra. Ny halavanny vanim-potoana mety ahalanianny vokatry ny taon-dasa dia 6 volana. 15 isan-jatonny mponina no atao hoe manan-karena. 15 isan-jatonny mponina no manana fari-piainana antonontonony.
Ny isanny vono olona tanatinny taona 1999-2001 dia 1. Tapaka in-1 ny lalana tao anatinny taona 1999-2001. Ny isanny vakitrano tanatinny taona 1999-2001 dia 2. Ahitana polisy ao aminilay kaominina. 1 no isanireo mpamono olona tratra tanatinny taona 1999-2001.